Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Sheegtay Inaanu Somaliland Khusaynin Qorshaha Doorashadda Somalia | Dhaymoole News
Wasiirka Arrimaha Gudaha Oo Sheegtay Inaanu Somaliland Khusaynin Qorshaha Doorashadda Somalia
Hargeysa(dhaymoole)Xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland, ayaa sheegtay inay aanu khusaynin qorshe ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga Soomaaliya oo jidaynayay qaabka ay doorashadu uga dhacayso Somalia, oo ay ku jirto Somaliland.
“Wax la yaab leh weeyi,waad la socotaaa 25 sanno ka hor Somaliya kala noqonay midnimadii hore ee aanu dawladaha isku darsanay,1960-kii dal Ingriisku gumaysto ayaanu ahayn,iyagana Talyaaniga ayaa gumaysan jiray”ayuu yidhi Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland Cali Maxamed Warancadde oo galabta la hadlay idaacadda VOA.
Wasiirku waxa uu ku dooday inaanay Somaliya xaq ugu lahayn inay sheegato dhul Somaliland isla markaana tirade ku darsato. “Markaa annagu waanu kala noqonaya wada jirkayagii hore oo aan awalba sharci ahayn,runtii waana waxyaabaha aadka layaabka u ah ee beenta iyo nidaam la’aanta ku salaysan,dal kala noqday wada jirkoodii inay maanta sheegtaan waa wax lagu qoslo,waana beenta ay dalkaasi nabad galyadiisu dagi laadahay ay ku maamulayaan,markaa waxaanu u aragnaa hadal nin waalani iska yidhi”ayuu yidhi Wasiirka arimaha gudaha Somaliland.
“Waxaanu hadda soo rognay in dalkii la odhan jiray Somaliland iyo Somalia sharciyo iyo baasaabooro,taasi mecneheedu yahay inay laba dal oo kala gaar ah yihiin,markaa haddii dad calooshood u shaqaystayaal jiraan danohooda ha u shaqaysaa,cid Somaliland wakiil uga ah ma jirto”ayuu yidhi Wasiir Calii wadan cadde.